Isithuthi esinyuswe ngoxinzelelo oluphezulu lweeLwelo zeNitrogen Pumps Skids-Isisombululo segesi kwiRhwebo-eBeijing Sinocleansky Technologies Corp.
Ulapha : Ikhaya>Irhasi yeMizi-mveliso>Isisombululo seNjini yeRhasi
Isilinda segesi seAluminiyam engenanto
Ingcinezelo High Jumbo Tube Isikhongozelo
Itanki ye-ISO yeCryogenic
Isalfure Hexafluoride Cylinder
Isilinda yeegesi zombane
Esikhethekileyo Gas Isilinda
Intsimbi yeRhasi edlayo
Isilinganisi sokulinganisa ugesi
Isithuthi esinyuswe ngoxinzelelo oluphezulu ...
Ukulungiswa kweegesi zoMzi mveliso kunye ...
Isithuthi esonyuswe uxinzelelo oluphezulu lweeNitrogen zeePompo Skids
Isithuthi esonyuswe uxinzelelo oluphezulu lweeNitrogen zeePompo Skids:
I-SinoCleansky ivelise inkqubo yokusebenza kwempompo yeskid (itroli) yesithuthi efana nescids sokunyusa uxinzelelo oluphezulu lwamanzi e-nitrogen kwimigodi yeoyile kunye nasemasimini erhasi, ukuhamba okukhulu kwesikhafu sempompo yenitrojeni yombhobho wegesi yendalo. Kwaye inkqubo enjalo ilungele ukuhambisa umendo omde; Ukongeza, banokuthenjwa okuphezulu. Umbhobho we helium kunye ne-nitrogen ukuvuza okufumanisa ukufana kwempompo (isatifikethi sokuhlelwa koluntu seCCS sele sidlulile) sisetyenziselwa ukufumanisa ukuvuza kwemibhobho yaselwandle. Izikhafu zempompo ye-LNG kunye ne-L-CNG skid yoxinzelelo oluphezulu zisetyenziselwa izikhululo zegesi yendalo; I-L-CNG kunye nezinye iinkqubo ezipheleleyo zisetyenziselwa ukushefa ngerhasi yendalo.
Ukuhamba: 50-15000L / H (imeko engamanzi)
Uxinzelelo lokuphuma oluphezulu: 70MPa
Inkqubo (impompo skid) yenqanaba lokudibanisa liphezulu; onke amacandelo afakwe ngendlela epheleleyo: inkqubo yamandla (iseti yejenereta yombane / iseti yejeneretha), impompo, umphunga, inkqubo yolawulo, umbhobho, inkqubo yokubonelela ngamafutha.
Inkqubo isebenzisa ukubeka iliso kwinqanaba kunye nolawulo lwePLC; ukusebenza ngokuzenzekelayo kwenkqubo kunokufezekiswa.
Inkqubo yokusebenza ilula: yintoni efunekayo ukwenza ukudibanisa ukungena kunye nokuphuma kwemibhobho, ukutshintshela ukubonelelwa ngomgubo, okanye ukuqala inkqubo ye powder.
Inkqubo inoyilo olukhethekileyo: inokulungelelanisa ukusebenza kwangaphandle kunye nokuhamba rhoqo kuhola wendlela. Ukongeza, ine-anti-bumping ebalaseleyo, ukungasebenzi komoya kunye nokusebenza ngokuzimeleyo.
Ukuhlaziywa kweeGesi zoShishino kunye neSitishi sokugcwalisa